Posted by Burmabüro Germany at 09:574comments:
Posted by Burmabüro Germany at 09:17 No comments:
kokomyanmarpyithar | January 20, 2015 |
ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများတွင် ရိုဟင်ဂျာဟူ၍ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိ ဇန်န၀ါရီ၈ရက်နေ့က ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးက ဗြိတိန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဆိုင်ရာ ရှင်းတမ်းဟုဆိုသည့် စာတမ်းတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ရပ်တန့်နေပြီး အချို့နေရာများတွင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်ဟု ဝေဖန်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူ့အခွင့်အရေး အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံက စောင့်ကြည့်နေသည်ဟုဆိုထားသည်။
ထို့အပြင်ရိုဟင်ဂျာဟု အော်နေသူများနဲ့ပတ်သက်၍ လည်း ရိုဟင်ဂျာလူ့အခွင့်အရေးကိုပို၍လေးစားရန် တိုက်တွန်းလိုသည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။ ပြည်တွင်းထုတ် နာမည်ကြီးသတင်းစာတစောင်က ""ဥပမာ-ကြေညာချက်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့သုံးတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံတော်သမ်္မတကြီးကိုယ်တိုင်က ကမ်္ဘာသိအောင် ပြောကြားထားသလို မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ထုတ်ဖော်နေတဲ့သဘောထား တွေကို ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ လေးစားဖို့လိုတယ်။
ကိုလိုနီခေတ်ကထားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီပြဿနာက ဒီကနေ့အထိ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ဒုက်္ခပေးနေတုန်း ဆိုတာ တွေ့နိုင်တယ်။ နိုင်ငံသားစိစစ်မှုငြင်းဆန်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ၊ ဒီဘင်္ဂါလီတွေကို နောက်ကွယ်က သွေးထိုးပေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်း အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပေးဖို့ လိုပါတယ်""ဟု သမ်္မတရုံးအကြီးတန်းအရာရှိတဦးကပြောသည်ဟု ရေးသား ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
မှန်ပေသည်။ ဗြိတိသျှနေမ၀င်အင်ပါယာထူထောင်ရေး ရည်ရွယ် ချက်ထဲ၌သာ မြန်မာနိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့လျှင် ဘင်္ဂါလီပြဿနာဟူ၍ရှိခဲ့မည် မဟုတ်သလို ရိုဟင်ဂျာဟူ၍ ထအော်နေသူများလည်းရှိခဲ့မည် မဟုတ်ပေ။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်မှာ ၆၇ နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ဗြိတိသျှတို့ချန်ထားခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီပြဿနာမှာ ယနေ့တိုင်ဖြေရှင်းမရနိုင် သေးဘဲရှိနေသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ ထအော်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေးတောင်းဆိုမှုမှာ တနေ့တခြားပိုမိုဆိုးဝါးလာနေသည်။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရာတွင်လည်း ဗြိတိန်အစိုးရ အနေဖြင့် အပြုသဘောပြောဆိုမှုများဖြင့် ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်သင့်ပါသော် လည်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်သည်ကို မတွေ့ရပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့် အချိန် မည်သည့်ခေတ် မည်သည့်အခါကမျှ မရှိခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်း သားဖြစ်ရေးတောင်းဆိုမှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးရန် ဖိအားပေးပြော ဆိုခြင်းက မြန်မာအစိုးရ၏ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်ရာရောက်နေသည်။
ဗြိတိသျှတို့စတင်အုပ်စိုးစဉ်ကာလ ၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်တပြည်လုံး မွတ်ဆလင်ဦးရေမှာ သုံးသောင်း(၃၀၀၀၀)သာရှိခဲ့သည်ဟု ဗြိတိသျှအစိုးရ ပြုစုခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် မွတ်ဆလင် ဦးရေ နှစ်သိန်းတသောင်းခုနစ်ထောင်ရှစ်ရာ(၂၁၇၈၀၀)အထိ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ တိုးလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် စစ်တကောင်းခရိုင်မှ ဘင်္ဂါလီများကို အထိန်းမရှိအကွပ်မရှိ ၀င်ထွက်ခွင့်ပြုထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရက ထိုသို့မွတ်ဆလင်ဦးရေတဟုန်ထိုး တိုးလာ မှုကို စိုးရိမ်လာရာ အခြေအနေကို စုံစမ်းရန် ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တခု ဖွဲ့ပေးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်ကမွတ်ဆလင်ဦးရေအတားအဆီး မရှိတိုးလာမှုကိုမဟန့်တားနိုင်ပါက နောင်တချိန်တွင် လူမျိုးရေးပဋိပက်္ခ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်ဒုတိယကမ်္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်လာခြင်းကြောင့် မည်သို့မျှမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ အစီရင်ခံခဲ့သည့် အတိုင်းပင် ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ကုလား-ရခိုင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် မူဂျာဟစ် သူပုန်ထခဲ့သည်။ မွတ်ဆလင် သီးခြားပြည်နယ် တောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဟူ၍ တောင်းဆို လာခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင်လည်း တောင်းဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။
၁၈၇၂ ခုနှစ်၊ ၁၉၀၁ ခုနှစ်၊ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တို့တွင်ကောက်ယူခဲ့ သည့် သန်းခေါင်စာရင်းများ၌လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ မပါရှိခဲ့ပေ။စစ်တကောင်းသား၊ ဘင်္ဂါလီစသည်ဖြင့်သာ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ သည်ကို တွေ့ရသည်။ အိန်္ဒိယစစ်ရေးချုပ်ရုံး၏ အမိန့်ဖြင့် ၁၉၂၄ ခုနှစ် တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးစုများ (Races of Burma) စာအုပ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်ကိုမတွေ့ရပေ။ ထိုစာအုပ်၌ ရခိုင်ပြည်အကြောင်း ရေးသားရာတွင် ""ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စစ်တကောင်းမှ လယ်စိုက်ပျိုးသူများ အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက်လွှမ်းမိုးလေ့ရှိသည်။ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးစုရှစ်မျိုးမှ ဆယ်မျိုးအထိနေထိုင်ကြရာ ယင်းတို့မှာ ခမီး၊ ဒိုင်းနက်၊ Chaw, Mro, Kon Kaungtsos နှင့် ချင်းလူမျိုးစုများဖြစ် သည့် Ku, Kyu, Welaung, Le'du နှင့် Yindu တို့ဖြစ်သည်""ဟု တွေ့ရသည်။
၂၄-၂-၁၉၄၇ ရက်စွဲဖြင့် ဂျမေတူအူလမားမွတ်ဆလင်အဖွဲ့က ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သည့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်များကို သီးခြားမွတ်ဆလင်ပြည်နယ်ထူထောင်ခွင့်ပြု ရန်နှင့် ပင်လုံညီလာခံတွင်ရပိုင်ခွင့်များ တင်ပြဆွေးဆွေးခွင့်ပြုရန် ဗြိတိ သျှအစိုးရသို့ စာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့မှုအပေါ် ဗြိတိသျှအစိုးရက ၁၈-၆-၁၉၄၇ ရက်စွဲဖြင့်အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းပြန်စာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သီးခြားမွတ်ဆလင်ပြည်နယ်တခု တည်ထောင်ပေးရန် မှာ လက်တွေ့မကျကြောင်း၊ ဘာသာရေးတခုတည်းဖြင့် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်မလာနိုင်သကဲ့သို့ မြန်မာမှာရော ကမ်္ဘာမှာပါ အစဉ်အလာမရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြားပြည်နယ်များမှာ သမိုင်းကြောင်းအရ မြန်မာဘုရင် များခေတ်တွင် သီးခြားပြည်နယ်များဖြစ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ရခိုင်ရှိ မွတ်ဆလင် များသည် ရခိုင်သို့မဟုတ် မြန်မာလက်အောက်တွင် အမြဲနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး သီးခြားပြည်နယ်ခွဲ၍နေထိုင်ခဲ့ဖူးသည့် သမိုင်းအစဉ်အလာမရှိခဲ့ကြောင်း စသည်ဖြင့်ပါရှိခဲ့သည်။ ဤအချိန်ထိ ရိုဟင်ဂျာဟူသော အမည်နာမကို မတွေ့ရသေးပေ။
ဤသမိုင်းဤမှတ်တမ်းများကိုကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသော လူမျိုးတမျိုးမရှိခဲ့သည်ကို ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤမရှိခဲ့ သည့်လူမျိုးကို အရှိတရားအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက လက်ခံအသိ အမှတ်ပြုပေးရမည်ဆိုသည်မှာ သဘာဝကျနိုင်မည်လား။ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနေရာတွင်ဝင်၍ စဉ်းစားကြည့်လျှင် သဘာဝကျ မကျသိနိုင်လိမ့် မည်။ ဗြိတိန်အစိုးရအနေဖြင့် မိမိတို့ဘိုးဘွားများ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စဉ်က ရေးသားခဲ့၊ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို မျက်ကွယ်ပြု၍ သူတပါးအစိုးရကို ဖိအားပေးဝေဖန်နေဖို့မသင့်ပေ။ ပြန်လည်လေ့လာ ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် သမိုင်းမှန်ကိုလက်ခံသွားရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ လွတ်လပ် ရေးရပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင်မှ ဘူးသီးတောင် ပါလီမန်အမတ် ဂါဖားရ်က ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကို လုပ်ကြံရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် တို့ က လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူမှ လူမျိုးမတူ တာနဲ့ မမုန်းပါဘူ။ (သူ့ နိုင်ငံ မှာပဲ သူနေရင်ပေါ့။) ဘာသာ မတူတာလဲ မမုန်းပါဘူး။ (သူ့ဘာသာ သူ ကိုးကွယ်နေ ရင်ပေါ့။) ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နိုင်ငံ ထဲ ကို တိုင်းတပါး သားတွေ ကျူးကျော် လာရင်၊ ကိုယ့် ဘာသာ ထဲ တခြားဘာသာ အယူ ၀ါဒတွေ သွပ်သွင်း ၀ါဒဖြန့်လာရင်။ ကိုယ်နိုင်ငံ ထဲ မှာ နေပြီး ကိုယ့် မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ ကို လက်မခံပဲ တသီးတခြား တိုင်းတပါး ယဉ်ကျေမှု တွေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တင်သွင်း လာရင် မုန်းမုန်း၊ မမုန်းမုန်း (လူများစုက) လက်မခံ နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါ ကိုယ်က ရန်လိုတာ လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့် တိုင်းပြည်ကို၊ ကိုယ့် ဘာသာ တရားကို၊ ကိုယ့် ယဉ်ကျေးမှု ကို ရန်စ ခံရတာပါ။
ကျွန်တော် တို့ က လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြမ်းဘက် ခြင်း ကိုလဲ အားမပေးပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး ကိုလဲ လိုလားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘင်္ဂလီ ကိုတော့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လုံးဝ လက်မခံနိုင် ပါဘူး။
မြန်မာ အချင်းချင်း ငြင်းကောင်းတုန်း ဘင်္ဂလီ အတွက် အလုပ် လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား အမည်ခံ (မြန်မာ နိုင်ငံသား ကဒ် ရပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်) မွတ်စလင်တွေ က ကမ္ဘာပတ် ပြီး မြန်မာ တိုင်းရင်းသား နဲ့ မြန်မာလူမျိုး ပျောက်ပြီး ဘင်္ဂလီ (ရိုဟင်ဂျာ) နိုင်ငံ ထူထောင်ဘို့ ကြိုးစား နေကြပါပြီ။
ဒီတော့ ဗုဒ္မဘာသာ တွေကလဲ (ဗုဒ္မံ၊ ဓမ္မံ၊ သံဃံ အစား) ၉၆၉ ရေး တာ၊ ၉၆၉ ကို အားပေးဘို့ စည်းရုံးတာ တွေ ရှိလာတယ်။ အခြားသူ၏ ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှုကို မထိပါးပဲ မိမိ တို့၏ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ တိုး တက်အောင် လူတိုင်း လွပ်လပ် စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။ ၉၆၉ ကို လက်မခံသူ များ လက်မခံ ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ လက်ခံသူများ လက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ သို့သော် ၉၆၉ သည် (အခြား ဘာသာဝင် များအား) အကြမ်း ဖက်ရန် လှုံဆော်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ (အကြမ်း ဘက် လို သူ များ သည် မည်သည့် ဘာသာကို ကိုးကွယ်သည် ဖြစ်စေ အကြမ်းဖက် လိုစိတ် များ ရင်တွင်း ကိန်းအောင်းနေ သူများ ဖြစ် ပါသည်။) ၉၆၉ ကို အကြမ်းဖက် မှုနဲ့ ပေါင်း မြင် တာ၊ ပေါင်း ပြောတာ ဟာ ဥာဏ်မမီ တဲ့သူတွေပါ။ ဘင်္ဂလီ လော်ဘီတွေနဲ့ သူတို့ သွေးထိုးမှုကို ယုံကြည်နေ တဲ့ ဥာဏ်မမှီ သူတွေပါ။
လူတိုင်း လွတ်လပ် စွာ ရွေးချယ် ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ကျွန်တော့ သဘောထား က အခြားသူ၏ ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှုကို မထိပါးပဲ မိမိ တို့၏ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ တိုး တက်အောင် လူတိုင်း လွပ်လပ် စွာ ဆောင် ရွက် ခြင်း ကို ထောက်ခံ ပါသည်။
Posted by Burmabüro Germany at 09:19 No comments:
"Boat People are not Myanmar"
"Boat People are not Myanmar" (MITV News Video)
Rakhine State Chief Minister U Maung Maung Ohn, Member of Emergency Management Leading Committee for the illegal migrants in the sea, Deputy Minister for Immigration and Population U Win Myint together with Special Envoy to the UN Secretary-General Vijay Nambiar and officials on May 23 visited the temporary relief camp at the Alae Than Kyaw village in Maung Taw Township that was opened for boat people.
Deputy Director , Maung Daw District Immigration Officer, Saw Naing:
"There are many boat people here. A group led by Lieutenant Commander Kyaw Zayar Oo from Myanmar navy ship No.568, foundaboat loaded with boat people, stranded at the Myanmar's sea territory. There are 208 boat people on it. All are boat men, including helmsman, and there are 17 crew members and3Bangladeshi interpreters. They found two trawlers, one is loaded with 208 people and the other one is just empty. The trawler is 68 feets in length and 17 feet in width. According to them, both of the trawlers can carry at least 400 people. We provided shelter and humanitarian assistances to them as well as informed to the concerned regional officials. Commander of Border guard, District Administrator, Regional Authorities, Departmental concerns and officers from immigration of population and border guard, altogether 40 people, lead by Police Brigadier General Tin ko, headed to AguMaw Port, urgently without delay, at the night. AguMaw Port is far3hours drive from Maungdaw District, kind of 40-48 miles".
"We waited there since 11pm at night. Navy ship couldn't land on the Agumaw port due to big wave. They finally docked at 2:35 am and as soon as they docked, we scrutinized them. We bring 25 boat people par time to this Alae Than Kyaw village by cars and placed them at the school. While doing the resettling process, we provided temporary shelter, food and humanitarian assistance in cooperation with UNHCR from Maung Daw District, WFP, MSF and other NGOs organizations. Our organization, population and immigration, what we do is, we asked them about where they are from and their country".
"As far as we asked over, there are 200 Bangladeshi people and 8 Bengalis. Bengali smugglers from Sittwe, come and pick the people at Kyauk Taw and leave those people forawhile at RathaeTaung. Then, placed them on the trawler. And the trawler went back as soon as they pay the money. As far as we observed, they'd been on the trawler since last two months ago. They have been treated noodle, stayed in the hatch and planned to send them to Malaysia. So far, we knew that the first trawler was already arrived to Malaysia. To arrange for the boat people, Myanmar Ministry of foreign affairs has to contact with Bangladesh's Border Affairs officers. There are 30 boat people aged 14 years old, and the others are over 18 or 19 years old".
The State Chief Minister said humanitarian assistance are being provided to the migrant people regardless of any race and citizen.
Chief Minister, Rakhine State, Maung Maung Ohn:
"Mr. Ban Ki-moon called our President to save the drifted migrant people to nearest coast without discrimination of any citizens with humanitarian concept. The President also gave that direction to the subordinate personnel. We are now providing physical and spiritual assistance to them and later we will conduct necessary verification process in line with the law. We will make arrangement to hand over them to their country as soon as possible. 17 crew members and the motorboat owner will be taken action according to the law. We will carry out the necessary process in line with the law. We think that this is the honourable task for Myanmar Government, Rakhine State Government and Rakhine nationals as they can save the lives of the migrant people stranded in the sea. We know that some of our citizens are misunderstanding about it. But this is the global issue and we are carrying out the task in cooperation with the United Nations".
"I'd like to urge all our citizens to understand it. Boat people also said that they are really thanked to the Myanmar government for saving their lives. They want to go back home and want to meet with parents. We will help them as much as we can for the humanitarian assistance. We will carry out handing over process as soon as possible".
The officials from the UN Agencies expressed thank the government and officials for giving quick assistance to the boat people and givingachance to meet with them.
UN Special envoy Advisor:
"I think the action taken for saving the two boats here and the large number of people, the migrants, were have being saved shows Myanmar has actually to cooperate with the Myanmar authorities and we hope that similar action be taken in case that are further other boats and other people who are suffering. I think the immediate question is to see that they are and then look after they are in the time here. ..... concerned country will identify and as a.... the national ... ... they will then take action to see how they can return to their home."
Resident Coordinator, Renata Dessallien:
"I would like to thank Myanmar government for rescuing these people and for treating them well once they got here on shore and looking after for their period of time until they return safely home".
The boat people also shared their experiences on the sea and answered the queries asked by officials of UN agencies and media persons.
Migrant: "I am really thankful to the government of Myanmar. We have faced lots of difficulties in the sea. I want to go back to my own country and want to see my family and my mother. I wish to go back to Bangladesh".
Migrant: "During the 50 days in the sea, I had lived on the boat and I haven't thought like I will reach to the land. Now I am survive and everything is new for me. I don't worry much, it will be stable very soon. After eating the rice and noodle, i feel newly fresh as I haven't had anything on boat. I was planned to go to Malay and wish to earn money for my mom and dad".
Migrant: "I am really thanks to the government. I am from Bangladesh and I wish to go back to my country. My parents won't still know whether we are alive or not".
The Chief Minister and officials also presented relief items to the migrant people. 200 Bangladeshi people and 8 Bengalis from Kyauk Taw are being accommodated at the temporary relief camp in Alae Than Kyaw Village, and they will be handed over to their country as soon as possible.
[View News Video :https://www.facebook.com/wai.hlaing.3/videos/10207136495599191/?pnref=story]
The organisers were not at all pleased that State Secretary Morten Høglund did not use the word 'Rohingya' during his address.
It would also appear that Yanghee Lee did not, in the event, participate in the conference. I would imagine that the manipulation apparent in the preparations for the conference, such as billing the messages from Tutu, Soros, Mahatir and others as "Calls to end the slow genocide of Rohingya" almost certainly without their prior approval, might well have deterred her from appearing. It would in any case have hadanegative impact on her mission, even if she is personally supportive.
The impact of the conference would be limited because it was overshadowed by more important meetings currently taking place elsewhere. The Security Council expects to be briefed today by the UN High Commissioner for Human Rights. The webcast was technically inadequate and for this reason it seemed that at most 30-40 international viewers attempted to login at any one time.
I have sentamessage to Bishop Tutu to which I doubt I will getaresponse. The Bishop wrongly assumed, from his African experience, that the border between India and Burma had been artificially drawn by the British. This led him to suppose that the British had improperly split the Muslim community in the border regions into two parts:
"The Rohingya people were not consulted when the British drew the Burmese border on the map. With those strokes ofapen, they becameaborderland people; people whose ancestral land traverses political boundaries."
This is not of course what the Rohingya activists wanted to hear – that they are historicallya'chosen people' tracing their descent directly to 8th Century Arab traders and having nothing to do with Chittagong culture.
Posted by Burmabüro Germany at 09:16 No comments:
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနှင့် ထောင်ချောက်မိ မြန်မာပြည် (အပိုင်း-၁)
မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့ထိ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ ရှိ The Nobel Institute & Voksenaasen တွင် ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ)များအပေါ် မြန်မာ၏ နှိပ်ကွပ်မှု အဆုံးသတ်ရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Conference တစ်ခု ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ Open Society Foundations မှ George Soros နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် Mrs Yanghee Lee တို့အပြင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်များအဖွဲ့၊ နော်ဝေ-မြန်မာကော်မတီနှင့် အခြားအဖွဲ့များမှ ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက် ကြမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူ မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်လည်း လှေစီးဒုက္ခသည်အရေး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအား ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များနှင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများက ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ)အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာကို လက်ညိုးထိုးအပြစ်တင်ထားကြပြီး အင်ဒုိုနီးရှားနိုင်ငံကို ခိုလှုံရောက်ရှိနေသည့် လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ မြန်မာနုိုင်ငံကလာသူ ၄၃ ယောက်ပါကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိက ပြောဆိုထားသည်။
"အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အာချေးပြည်နယ်ကို ရောက်လာကြသူ ၁၃ဝဝ လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ ၆ဝဝ လောက်က ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ထဲက တချို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လာတယ်လို့ ပြောကြပြီး တချို့ကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်က လာတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။" ဟု အင်ဒိုနီးရှား အရာရှိ Mr.Baloch က ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကဟု ဆိုသည့် ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) ၄၃ ဦးလုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း
တွင်နေထိုင်သည့် နေရပ်လိပ်စာ မပြောဆိုနိုင်သလို မြန်မာစကားလည်း မပြောတတ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာအစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှ လှေစီးဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား မှန်ကန် ကြောင်း အထောက်အထားပြနိုင်ပါက လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်ပေးသွားမည်ဟု တနင်္လာနေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတကာ သံတမန်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ) ပြဿနာမှာ လူမှောင်ခိုကူးမှုသာဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်
မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဆက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ''ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်လို့ ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူး။ ဒါတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ တချို့လူတွေကို မလေးရှား၊ အင်ဒို တို့ကို ပို့ဆောင်ဖို့လုပ်တဲ့ လူမှောင် ခိုကူးတဲ့ကိစ္စ၊ လူကုန်ကူးတဲ့ကိစ္စရဲ့ အကျိုးဆက်တွေလို့မြင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ မိသားစုအဖွဲ့ ၀င်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလူကုန်ကူးမှု ကို ဖြေရှင်းဖို့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်''ဟု ၀န်ကြီးဦးရဲထွဋ်က အစည်းအဝေးပြီးတွင် သတင်းထောက်များအား ဖြေကြား ထားသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနှင့် ထောင်ချောက်မိ မြန်မာပြည် (အပိုင်း-၂)
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ၊ လူမှောင်ခိုပြဿနာ နှင့် ခိုးဝင်ပြဿနာ အများဆုံးဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး လူပွဲစားအများအပြားရှိကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် မလဲ့လဲ့ထွန်းမှ ယခုလိုပြောသည်။
"ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူပွဲစားတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့က စီးပွားရေးပဲကြည့်တယ်။ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးမရွေးဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံသားကိုမဆို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခေါ်သွင်းကြတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘင်္ဂါလီတွေကိုလည်းခိုးသွင်းတယ်။ ရဲက ဖမ်းရင်တော့ ဘင်္ဂါလီတွေက မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ ဖြေကြတယ်။" ဟု မလဲ့လဲ့ထွန်းမှ ဆိုသည်။ လွန်ခဲ့သည့်လက ထိုင်းနှင့် မလေးရှား နယ်စပ်တောထဲတွင် မြှုပ်နှံထားသည့် ဒါဇင်နှင့်ချီသည့် ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) အလောင်းများကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ သံသယရှိသူများကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ လူကုန်ကူးသူများ၊ သို့မဟုတ် လူမှောင်ခုိုကူးသူများကြောင့် ၎င်းတို့တွေ လှေစီးကာ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်များကို ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးကြသည်ဟု ပညာရှင်အများစုက သုံးသပ်ကြသည်။
မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနတွင် မေလ ၂၀ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားသည့် "ဘင်္ဂါလီဆိုတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်ရမှာလား"
ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပေးစာတစ်စောင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်မြို့ အများအပြားကို ရောက်ခဲ့ဖူးသူ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်း ဦးသာထွန်းမှ လူကုန်ကူးမှုကြောင့် လှေစီးပြေးပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ သူတို့နိုင်ငံမှာ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေလို့ ပင်လယ်ပြင်ကို လှေနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီး ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာကို ဘာမှမဆိုင်ဘဲ
နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေကြောင့် ထွက်ပြေးရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ
ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင်လက်ခံ အောင်ပြောဆိုနေခြင်းကို လက်မခံကြောင်း
မောင်တောမြို့သည် လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်လေးဆယ်ကျော်က လူဦးရေယခုလောက် မများသေးဘဲ နောက်ပိုင်း ဒီနိုင်ငံမှာ ဘင်္ဂလီတို့အတွက် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေနိုင်တာကို သိလာကြပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တရားမ၀င် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကာ ဘင်္ဂါလီဦးရေက ကြီးထွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးသာထွန်း က ဆိုသည်။ ယခုအခါ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တော ဒေသများတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဦးရေမှာ ၁၀% သာရှိပြီး ဘင်္ဂါလီ ဦးရေက ၉၀% ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာမှ လူ့ အခွင့်အရေးအကြောင်းပြလျက် boat people များကို လက်ခံရန် ဖိအားပေးနေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အနေနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောလိုသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုသော လူမျိုးမရှိ။ ၄င်းတို့မှာ မြန်
၁။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်တွင် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့ သည် လယ် နှင့် အလုပ်ကြမ်းများလုပ်ရန် အတွက် အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသား စစ်တကောင်းနယ်သား များကို ခေါ်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် စာရင်းမှတ်
တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများတွင် စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီများဟုသာ တွေ့ ရသည်။ ဆိုရလျှင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်
အထိ ရိုဟင်ဂျာဆိုသော လူမျိုး မရှိ၊ နိုင်ငံခြားသား စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီများသာ ရှိ်ကြောင်းသိနိုင်သည်။
၂။ ယခင်က မရှိသောလူမျိုးတစ်ခု ၏ အမည်အသစ်တစ်ခု ဘာကြောင့် နေ့ ချင်းညချင်းမိုးပေါ်ကကျလာ သလို ပေါ်လာရပါသနည်း?
ရှင်းပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် အောက်တွင်တိုင်းရင်းသား အနေဖြင့် အခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုလို၍ မရှိခဲ့သော လူမျိုးအမည်ကို အကွက်ကျကျဖန်တီးပြီး၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ရေရှည်စီမံကိန်း ဆွဲကာ နိုင်ငံတကာသို့ ပေါက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၃။ စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီ၏ မျိုးနွယ်စု ဆင်းသက်ပုံမှာ -
Indo-European_Indo-Iranian_Indo-Aryan_Eastern zone_Bengali Assamese_Chittagonian ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီရဲ့ ISO Code မှာ (ISO 639-3 : cit) ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘင်္ဂလီ-အာသံ မျိုးနွယ်စုမှ ရှိရင်းစွဲ ဘင်္ဂလီစစ်တကောင်း လူမျိုးစုကနေ စစ်တကောင်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး လူမျိုးစုနှစ်စုကို မွေးထုတ်လိုက်ပါသည်။ ISO 639-3 : cit ကိုပယ်ဖျက်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ ISO 639-3 : ctg နဲ့ ISO 639-3 : rhg ဆိုပြီး ဖန်တီးလိုက်ပါသည်။ ယခင် စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီ၏ မူရင်းဒေသ သည် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဖြစ်သော်လည်း ယခုတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့မြန်မာ ဆိုပြီး နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ (BBC မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ကို Arakan- ရိုဟင်ဂျာပြည်နယ်လို့ လော်ဘီလုပ်တာနှင့် တချိန်တည်းဖြစ်ပါသည်။)
ယခုဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများရှေ့မှောက် တွင် boat people များ သည် မြန်မာနိုင်ငံမှမဟုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံသား များသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ရေပိုင်နက်တွင်ဖမ်းဆီး ဖော်ထုတ် သက်သေပြလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့ တွေ့ ကြုံနေရသော boat people များ ဖြစ်ပေါ်လာစေသော အဓိကတရားခံ သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အဆမတန်ပါက်ကွဲနေသော လူဦးရေသာလျှင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအရွယ်အစားနှင့် ပေါက်ကွဲနေသာ လူဦးရေ အချိုးအစား မမျှတသဖြင့် (စားစရာ၊ နေစရာ ကျပ်တည်း ဒုက္ခရောက်နေသူများသည် ပိုကောင်းမွန် သောနေရာဒေသများသို့တရားမ၀င်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်၊ အခွင့်သာလျှင် အခြေချရန် (အင်ဒို နီးရှား၊ မလေးရှား၊ ထိုမှတဆင့် UN ကဒ်လျောက်ပြီး ဒုက္ခသည်အမည်ခံကာအနောက်နိုင်ငံများသို့ သွား ရောက်ရန် မျှောင်လင့်ချက်ဖြင့်) လူကုန်ကူးခံကာပင်လယ်ပြင်ကျော်ဖြတ်ထွက်လာကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ၏ လူဦးရေပေါက်ကွဲမှု ပြသနာကို ထိန်းချုပ်ရန်မကြိုးစားပဲ မိမိနိုင်ငံအတွင်းတွင် ဒုက္ခသည်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ UN အကူအညီဖြင့် ကျွေးမွေးထားကာ၊ နိုင်ငံမှ ပင်လယ်ကျော်ဖြတ်ကာ တရားမ၀င်ခိုးထွက်သည့် မိမိနိုင်ငံသားများအား မျက်နှာလွဲ ခဲပစ်လုပ်တတ်သော၊ အခြားနိုင်ငံများတွင် ခိုးဝင်များအားဖမ်းမိ၍ မြန်မာနိုင်ငံအား ၀ိုင်းလက်ညှိုးထိုးနေချိန်တွင် မိမိနှင့်မဆိုင်သလို နှုတ်ဆိတ်နေတတ်ပြီး၊ ယခုကဲ့သို့ ငြင်းမရ နိုင်တော့ မှဝန်ခံတတ်သော၊ မိမိနိုင်ငံမှ မထွက်ခွာခင်က မတားဆီးခဲ့ပဲ၊ ပင်လယ်ထဲမှာ မုန်တိုင်းမိ အစာရေ စာပြတ်၊ လူကုန်ကူးသူများနှိပ်စက်ခံထားရသူတွေကို ပြန်ရောက်လာလျှင် အပြစ်ပေးမည် ဆိုသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရအား မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် မိမိနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မက်ဆီကန် များကို လက်မခံပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် လည်း မိမိနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက် နယ်စပ်မှ ခိုးဝင်လာသူများကို လုံးဝလက်မခံပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ထွက်လာသော boat people နှင့် နယ်စပ်မှဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်လာသူ များကို လူသားချင်းစာနာပါသည်။ သို့သော် အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် လုံခြုံရေးကိုသာ ဦးစားပေးနိုင်ပါမည်။
သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်မှ ရောက်ရှိနေထိုင်လာသူဘင်္ဂလီ စစ်တကောင်းသားများက မိမိတို့ နေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာ မစောင့်သိပဲ မြန်မာ့မြေကို ဖဲ့ထုတ် အပိုင်စီးရန်ကြံစည်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ ရသဖြင့် ၄င်းတို့နှင့်၎င်းတို့ ၏မျိုးဆက်များ၊ နောက်ထပ်ကျုးကျော် ခိုးဝင်ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံကိုသစ္စာမခံသော ဘင်္ဂလီ စစ်တကောင်းသားများကို မြန်မာနိုင်ငံက လက်သင့်မခံလိုကြောင်းပြောကြားလိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အချုပ်အချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မိမိတို့ နိုင်ငံတွင်မည်သူနိုင်ငံသား ဖြစ်သင့်သည်။ မဖြစ်သင့်ဆိုသည်ကို မိမိတို့ နိုင်ငံရှိပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများအတိုင်းသာ ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးဖြစ်သော ဘင်္ဂလီစစ်တကောင်းသားများနှင့် ၄င်းတို့ ၏မျိုးဆက်များသည် မိမိတို့ နေထိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို လေးစား လိုက်နာ သစ္စာစောင့်သိသင့်သည်။ ပြည်တွင်းမှ ဘင်္ဂလီလော်ဘီများသည်လည်း မိမိတို့ နေထိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တွင် သစ္စာစောင့်သိပြီး ကျုးကျော် ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီ များကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း၊ လူ့ အခွင့်အရေးအကြောင်းပြ ထိုသူတို့အတွက် အခွင့်အရေးတောင်းခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကမရှိပါဟုပြောသောအမည်ကိုသုံးစွဲခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပေ။
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများ အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှ boat people များ သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာများ ဖြစ်သည်ဟုစွတ်စွဲပြောဆိုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ မရှိပါဟုပြောဆိုသော လူမျိုးစုအမည်ကိုသုံးစွဲခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တွင် လူ့ အခွင့်အရေးအကြောင်းပြ ဖိအားပေး လက်ခံခိုင်း ခြင်းများ မပြုလုပ်ပဲ အမှန်တကယ် root cause ဖြစ်သော (ဒေသတွင်းတစ်ခုလုံးသာမက ကမ္ဘာကြီးကိုပါ ခြိမ်းခြောက် လျှက်ရှိသော) ဒေသတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်၏ လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုအား ထိန်းချုပ်ရန် ၄င်းအစိုးရကို ဖိအားပေးခြင်း၊ သားဆက်ခြားကျန်းမာရေး၊ family planning တို့ အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေး ခြင်းများ
ထို့ အတူ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအားခြိမ်းခြောက်နေသော ဒေသတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှု့ နောက်
ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်သော ပင်လယ်ဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှု ပပျောက်ရန် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သြစတေးလျနိုင်ငံများ အားလုံးပူးပေါင်း တိုက်ဖျက်ပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ မဏ္ဍိုင်5 မှ တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
Myanmar 5th Pillar (မဏ္ဍိုင်5)
နေ့ စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ မေလ ၂၇ ရက်
အိန္ဒိယရဲ့ နယ်နိမိတ်စည်းအတွင်း အသေပစ်သတ်ရေး(Shoot-to-kill-policy) မူဝါဒနှင့် ဘင်္ဂလီကုလားများ
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းခြံစည်းရိုးဖြတ်ကျော်ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင်ကုလား တစ်ထောင်နီးပါးကို အိန္ဒိယနယ်ခြား
စောင့်တပ်ကပစ်သတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ လူ့ အခွင့်အရေးသမားတွေပွက်ပွက်ညံစောဒကတက်ခဲ့ကြတယ်။ အိန္ဒိယအစိုးရကတစ်လုံးပဲပြန်ပြောခဲ့တယ် - "သူတို့ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီအရေအတွက်ဟာ အမေ
ရိကန်နဲ့မဆီကန်နယ်စပ်မှာ အမေရိကန်ကပစ်သတ်ခဲ့တာလောက်မများဘူး" ဆိုတာပဲ။လူ့ အခွင့်အရေး
အခုအချိန်အထိ အိန္ဒိယက ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီ ခလေးခွေး မိန်းမမကျန် အားလုံးကိုပစ်သတ်နေတာဘယ်လူ့ အခွင့်အရေးသမားမှ အသံကောင်းမလွှင့်နိုင်တော့။အိန္ဒိယရဲ့ BSF (Border Security Force)ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာ တပ်ရင်းပေါင်း (၁၈၆) ရင်းနဲ့အင်အား
နှစ်သိန်းလေးသောင်း ကျော်ရှိပြီး အမျိုးသ္မီးတွေပါ BSF မှာ ပါဝင်အမူထမ်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စ
တန်နဲ့ နျူကရီယာအဆင့်အထိထပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မူတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးသည့်နောက် အိန္ဒိယ
ရဲ့အမြဲတမ်းတပ်တွေကို ပါကစ္စတန်နဲ့ ထိပ်တိုက်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီး - ကီလိုမီတာ (၄၀၉၅) ရှိတဲ့ အိန္ဒိယ
ဘင်္ဂလီအားလုံးကို အသေပစ်သတ်ရေးမူနဲ့စာရင်းရှင်းခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလီကုလားနဲ့(၁၉၃) ကီလိုမီတာပဲ နယ်နိမိတ်ဆက်စပ်မူရှိတဲ့ မြန်မာအနေနဲ့မိမိနယ်စပ်ကိုBSF လို ကျင့်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ (လ.၀.က နဲ့န.စ.ကအောက်ခြေအဆင့်ပင် ငွေကို ဂုံနီအိတ်နဲ့ သယ်ပြီး ကုလားကိုသွင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုး ထပ်မကြုံသင့်တော့ပါ)။ ခတ်ခဲ့တဲ့ခြံစည်းရုံးတွေလည်း ဘင်္ဂလီကုလားတွေက
ဖြုတ်ပြီး ကော်ဆ်ဘဇားဈေးမှာရောင်းလို့ ကုန်လုပြီ။
ကျွန်တော်တို့ ခြံစည်းရိုးကို BSFလိုကာပြီးBSF လို သတ်ကွင်းထားကင်းလှဲ့ ဖို့ အတွက်အင်အား နှစ်သောင်းနဲ့ငါးသောင်းကြားလိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ ဘင်္ဂလီကုလားတွေနဲ့ မလွှဲမရှောင်သာ
စစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ရေတပ်နဲ့လေတပ်ကို အခုထက်ပိုပြီးတည်ဆောက်ဖို့ လိုပြီး သန်း (၁၆၀) နဲ့ (၅၅) သန်းစစ်ခင်းဖို့ အတွက် (၄၈) နာရီအတွင်းအသင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့ အရံအင်အားအတွက်အသင့်ပြင်
ထားရပါတော့မယ်။ အခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ ကြိုပြင်သင့်ပါပြီ။
Hlaing Bwa လှိုင်ဘွား
ဓတ်ပုံ - ၀ါးလုံးနှင့်စက်ဘီးပုံ
အိန္ဒိယ BSF တပ်ဖွဲ့ ဝင်များမှ လက်တွေ့ ပြသနေပုံ)
ကိုယ်တို့မြန်မာတွေဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ရင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပညာရှာမှီးရင်း
သော်လည်းကောင်း မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွာပြီး တစိမ်းတွေရဲ့ ရပ်ရွာမှာ ခိုလှုံနေကြရတယ်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ အဲသည်အကြောင်းတွေကို တိုင်းတပါးသားက စပ်စုလာခဲ့သည်ရှိသော်
ရိုဟင်ဂျာ လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နံမည်သစ်ပေးထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဘင်္ဂလား-ရခိုင်နယ်စပ်မှာ ပဝေသဏီကတည်းက နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမခံရပဲ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နေလာကြတာ ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘများက မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ပဲ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ
မွေးဖွားရုံသက်သက်နဲ့ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်ခံပေးလို့ရတဲ့ဥပဒေ မြန်မာပြည်မှာ မရှိပါဘူး။ သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့သူတို့ အဲသည်အရပ် အဲသည်ဒေသမှာ ကာလရှည်ကြာ နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြတာ ဘာပြဿနာ ရှိလို့လဲ။ သူတို့လည်း လူသားတွေပဲဟာ။ ဘယ်ဂြိုလ်ကမှ ကျလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်နေပါတယ်တို့၊ ရွာလုံးကျွတ် မီးလောင်တိုက်သွင်းပါတယ်တို့ ဆိုတဲ့ ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် ပုံပြင်တွေကို ယုံချင်ရင်တော့ တခြား မကြည့်ပါနဲ့။ လွှတ်တော်ထဲက ဘင်္ဂါလီအမတ် ဦးရွှေမောင် ဆီမှာ သူ့မှတ်ပုံတင်၊ သူ့မိဘမှတ်ပုံတင် တောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်က တိုင်းသိပြည်သိ မွေးထားတဲ့သမီးတစ်ယောက်လုံး ၅၉ (စ) နဲ့ ငြိနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ သူလိုလူတွေ လွှတ်တော်ထဲရောက်နေတာကိုကြည့်ရင် အဲသည်လူတွေအပေါ်ထားတဲ့ အစိုးရသဘောထားကို သိသာပါလိမ့်မယ်။ မရောက်ဖူးသေးရင် ဘူးသီးတောင်မောင်းတောကို အလည်သွားကြည့်ပါ။ လူနည်းစုကဋ္ဌ
ဘယ်သူ လူများစုကဘယ်သူ၊ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို တရွာလုံးဝိုင်းရိုက်၊ တစ်အိမ်လုံးသတ်ပစ်ပြီး
မောင်းထုတ်လိုက်တယ် ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ ဘင်္ဂါလီရွာမှာ ရခိုင်ဆိုတာ မူးလို့တောင် ရှူစရာ ရှာမရပါဘူး။ အနံ့ရတာနဲ့ သတ်ပစ်တာ။ သည်လူတွေက သူတို့ကို ရခိုင်တွေသတ်ပါတယ်ဆိုပြီး လှေကြီးစီးလို့ အခေါက်ခေါက်အခါခါ ပင်လယ်ထဲကို ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာ ယုံတဲ့သူတွေကအ တာလား။ လိမ်တဲ့သူတွေက ပိရိတာလား။
အခုမှ အသံကောင်းဟစ်ပြီး မြန်မာ လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ ထိုင်းတွေဆီမှာ တရားဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အန်ဂျီအိုတွေ ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အဲသည်မှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ သူ့အလုပ်က ဘင်္ဂါလီရေမျောကမ်း
တင်တွေ ရောက်လာရင် ကမ်းပေါ်ခေါ် ထမင်းကျွေး၊ အစားအသောက် နဲ့ရေဖြည့်ပေးပြီး လှေကို နိုင်ငံတကာ
ရေပိုင်နက် ရေစီးကြောင်းထဲရောက်အောင် ဆွဲခေါ်သွား၊ အဲသည်ရောက်ရင် စက်ဖြုတ်ပြီး မျှောထည့်လိုက်ဖို့ပါ။ စက်မဖြုတ်ရင် ကမ်းပြန်ပြန် ကပ်လာတတ်တာရော၊ နောက်တစ်ခေါက် လူသစ်တွေ သွားတင်တာကြောင့်ရောမို့ စက်ဖြုတ်ပါသတဲ့။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို သူ့ဆီက သတင်းထောက်က အဲသည်လူတွေကို လက်ခံထားဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိ မေးတဲ့အခါ "မင့်အိမ်မှာနေရာအပိုရှိသလား။" လို့ မေးပါသတဲ့။ ဘင်္ဂါလီတွေ ရေကြောင်းသွားလာ ရွက်နာဝါ လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ သူတို့ပါးစပ်က အလွယ်တကူ စကားပြန်ကို ပြောတဲ့အတိုင်း မြန်မာတွေ ရခိုင်တွေက သတ်လို့ဆိုရင် သူတို့ကို မြန်မာစကား ရခိုင်စကား တစ်ခွန်းလောက် ပြောကြည့်ပါ။ လုံးဝနားမလည်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ မြန်မာစကား နားလည်တဲ့ ဘင်္ဂါလီဟာ တတိယနိုင်ငံကို ဒုက္ခသည်ဗီဇာနဲ့ရောက်ဖို့ ရေကြောင်းက သက်စွန့်ဆံဖျား သွားစရာ မလိုပါဘူး။ ကုန်းကြောင်းကနေ
မြန်မာပြည်တွင်းဝင်ရင် ပိုက်ဆံအကုန်အကျလည်း သက်သာပါတယ်။ ချင်းတောင်ဘက်က ပတ်သွားမလား။ အမ်းဘက်ကနေ တည့်ဆင်းမလား။ ပွဲစားတွေ ပြည့်နေတဲ့နေရာမှာတော့ ပြောရရင် အသည်းနာဖို့တောင်
ကောင်းသေး။ ရဟန်းမှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားတဲ့ မြန်မာဘုန်းကြီးတစ်ပါးက အဲသည် ထိပ်ဖြတ်သူငယ် အယောက် ၂၀ ကျော်ကို ကိုရင်ဝတ်ပေးပြီး တစ်ယောက် နှစ်သိန်း နဲ့ ရန်ကုန်အရောက်ပို့တာ ဖမ်းမိဖူးပါတယ်။ လူကိုလူချင်း ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ကုန်ကူးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်သူအဖို့ တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုရင် နှစ်ခါ မစဉ်းစားပဲ ရောင်းစားပါလိမ့်မယ်။
အမ်းမှာ နှစ်နှစ်လောက် နေရတဲ့အခိုက် ရဲစခန်းကိုပို့ပေးရတဲ့ ရဲဆေးစာ ထက်ဝက်လောက်ဟာ ရိုးမပေါ်မှာဖမ်းမိတဲ့ ဘင်္ဂါလီကလေးတွေကို အသက်စစ်ဆေးပေးရတဲ့ ဆေးမှတ်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဖမ်းရမှာတောင် ကြောက်နေရတဲ့ဘဝ။ တစ်သုတ်တစ်သုတ် ဖမ်းမိလိုက်ရင် ရဲရော၊ လဝကရော၊ ဆရာဝန်ရော၊ အလုပ်တွေကို ရှုတ်နေတာပဲ။ သူတို့က အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ လာတာ။ ဝန်ဆောင်ခက အိမ်ကထွက်လာတုန်းက ပွဲစားကို ပေးလိုက်ပြီးသား။ နောက်တစ်ရစ်က လူ ရန်ကုန်ကိုရောက်မှ ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် အိမ်ကလူက ပွဲစားကို ငွေချေမှာ။ မင်းဘူးအရောက် ဘယ်လောက်၊ ရန်ကုန်အရောက်က ဘယ်လောက်၊ (ရန်ကုန်မှာ နေစရာရော အလုပ်ပါ ပေးထားမယ့်သူရှိတယ်။ မသိရင် စုံစမ်းကြည့်။) စာအုပ်ထွက်အပြီး ဘယ်လောက်၊ မလေးအရောက် ဘယ်လောက်၊ အကုန် သူ့ဈေးနဲ့သူ အရစ်ကျပေး၊ ဟိုက ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်ရင် အကျွေးကျေအောင်ဆပ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်စာ စားရိတ်ပို့တာပါ။ သူ့ဟာနဲ့သူ အဆင်ပြေနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးကို ကိုယ်တွေသွားဖမ်းလိုက်မိမှ ကုလားအယောက် ၂၀ စာလောက်ကို အချုပ်ထဲမှာ ထမင်းချက်ကျွေးရသေး။ နေမကောင်း ဆေးအလကား ကုပေးရသေး၊ အသက်စစ်ဖို့ ဓါတ်မှန်တွေရိုက်(အဲ့ဒါ ဝန်ကြီးဌာနက စိုက်ရတာ)၊ အသက်မပြည့်ရင် လဝကကြီးတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ့်စားရိတ်ကိုယ်စား၊ သူ့စားရိတ်ပါကိုယ်ကျွေးလို့ အိမ်တိုင်ယာရောက် ပြန်ပို့ရပါတယ်။ ပြန်ပို့တဲ့လဝကကြီး အမ်းပြန်မရောက်သေးခင် အဲသည်ကလေးက နောက်တစ်သုတ်နဲ့ ပါသွားပြန်ပါရော။ သူတို့က မြန်မာစကား ပြောနိုင်တာမို့ ဆေးရုံမှာကျကျနနကြီး အင်တာဗျူးဖူးပါတယ်။ သူတို့ကို မြန်မာပြည်ထဲမှာ နေမလား မေးကြည့်။ အသေသာခံလိမ့်မယ်။ မနေဘူး။ ဟိုကိုရောက်မှ အိမ်ကမိသားစု ငွေပြန်ပို့နိုင်မှာ။ သူလည်း ဟိုကလူ ငွေလှမ်းပို့လို့ ထွက်နိုင်တာ။ ဟိုရောက်သွားရင် သူတို့ဘဝက ကိုယ်တို့မြန်မာတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ သာတယ်။ သနားအောင် ငိုပြတတ်ရုံနဲ့ အလုပ်မလုပ်ပဲ ထိုင်စားလို့ရပြီ။
အဲသည်လူတွေကို နဂိုတုန်းက မလေးက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံတာပါ။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေလည်း ဖွင့်ထားပေးတယ်။ တတိယနိုင်ငံတွေမှာ ခိုလှုံခွင့်ရအောင်လည်း အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ပေးတယ်။ ကိုယ့်ကို အင်မတန်မေတ္တာထားတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင် အဲသည် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်စခန်းမှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ သာဓုပါဗျာ။ သူတို့က လက်ခံလေ။ နောက်ထပ် လူလားမြောက်လာသမျှ ဒုက္ခသည် အလောင်းအလျာကလေးတွေ ဝင်လာမစဲ တသဲသဲ ရှိလေပေါ့။ မီးပွိုင့်မှာ တောင်းစားတဲ့ သားသည်အမေကို ပေးရကမ်းရသလိုပ။ သူငွေဝင်လမ်းဖြောင့်လေလေ၊ ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးတွေ လိုက်ရှာပြီး နေ့စားနဲ့ ငှားစားလေလေပေါ့။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့သူတွေကပဲ လူသားချင်း ကျွန်ပြုပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့သူတွေကို အားပေးအားမြှောက် ပြုရာရောက်တာ။ တစ်ရာကယ်လိုက်၊ တစ်သောင်းလိုက်လာမယ်။ တစ်သိန်းလောက်က တန်းစီထားပြီ။ ကယ်မယ့်ကယ်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တစ်နိုင်ငံလုံး ချောင်ဆင်းသွားတဲ့အထိ လိုက်ကယ်ကြပေါ့။
ဒါပေမယ့်လည်း အခုတလောမှာ သူတို့ဆီမလည်း ပေါ်လစီပြောင်းသွားလို့လား။ ကြာကြာဝါးလို့ ခါးမှန်းသိသွားသလား မပြောတတ်ဘူး။ လက်ခံရမှာ အင်တင်တင် ဖြစ်လာပုံရတယ်။ ဘင်္ဂါလီဆိုတဲ့အမျိုးကလည်း ကိုယ်တို့အခေါ်ဆို ခေါ်တောကုလား ခေါ်တယ်ဗျ။ လက်ဖျားနဲ့ တို့စရာမလိုဘူး။ ကြည့်ရုံလေး ထိုင်အကြည့်ခံလိုက်၊ ကြက်သီးတွေ ထလာလိမ့်မယ်။ ခေါ်တောကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလား။ အခုတော့ "မင်းမျက်ဝန်းလေးက ထူးဆန်းတယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေရှိတယ်။" တို့ဘာတို့ သာသာယာယာ တေးသွားကလေးတွေ မဆိုနိုင်တော့ဘူး။ ဖောင်ပေါ်မျောလာတဲ့ သမ္ဗဝညီနောင်တွေကို ကမ်းကပ်မှာစိုးလို့ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ လှမ်းတွန်းထုတ်သလို ထုတ်ကုန်ကြပြီ။ ဒါ ဘယ်သူ့အပြစ်ရှိရဦးမလဲ။ ခါတိုင်း ပြစ်တင်ဖေဖန်နေကျ မြန်မာအစိုးရပဲ ဆက်ပြောကြတာပေါ့။ ရိုးရာမပျက်လေ။ ကိုယ်တွေက လွန်စွာမှပင် စိုးရိမ်ပူပန်မိပါကြောင်းလို့ ဟစ်လိုက်ရင် ဘာတာဝန်မှ မရှိတော့ဘူး။
တကယ်တော့ အဲ့သလောက်တောင် ထမင်းရည်ပူလာ လျှာလွှဲစရာ မလိုပါဘူး။ လှေတော်သားမောင်ရို့ မြန်မာလိုတတ်သလား မေးလိုက်၊ တတ်ရင် ဘာမှမလုပ်နဲ့ အစီးလိုက် သည်ပြန်ပို့။ သူတို့ရပ်ရွာ မှည့်တစ်ပေါက်မစွန်းပဲ ရောက်စေရမယ်။ ဘယ့်နှယ်လဲ။ ပြန်လာမလား မေးကြည့်လိုက်။ သည်ပြန်ရမှာစိုးလို့ မြန်မာတွေက သူတို့ကို သတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ မူလကျီသွန်နီလုပ်နေတာကို ယုံရင်လည်း ကုလသမဂ္ဂမဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးကိုယ်တိုင် ဦးစီးလို့ မောင်းတောအရောက် ပို့တော်မူ။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထွက်ရင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ပို့ကြေး။ ကိုယ်က အဲသည်အလုပ် လုပ်နေတယ် မဟုတ်လား။ စိုးရိမ်မကင်းဘူးဆို။ ပို့မယ့်ပို့ ကူးတို့ရောက်အောင်သာ ပို့ခဲ့ပါလေ။ ခမျာများ သနားစရာ။ နိုင်ငံတကာက မူဆလင်ညီနောင်အချင်းချင်းတွေ ညှာတာထောက်ထားလို့ အကူအညီများ မစချင်ပါတယ်ဆိုလည်း သာဓုပါမောင်။ နောင်လာနောက်သားများအတွက်ပါ ပိုပိုသာသာလေး လှူခဲ့တန်းခဲ့ပါ။ တစ်ယောက်ကယ်လိုက်ရင် ဆယ်ယောက်ထပ်ထွက်လာမှာဆိုတော့
ညောင်စေ့လောက်လှူပြီး ညောင်ပင်ကြီးလောက် ကုသိုလ်ရပါလိမ့်မယ်။ သည်လိုမှ မဟုတ်ပဲ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်လုပ် မြန်မာအစိုးရကိုမှ အားရပါးရ ကလော်တုပ်ချင်တာဆိုရင်တော့ ဘရားဗိုး ဝမ်းစမိုး တခဲနက်ကို ထောက်ခံအားပေးပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မဆဲလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆဲနေရတာ အာတောင်ညောင်းလာပြီ။ ခများတို့ တလှည့်ဆဲတော့ ကျုပ်တို့ အနားရတာပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် တစ်ခုခု အရာထင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့လေ။ ကုလသမဂ္ဂဆိုတာတောင် ဘယ်သူကမှ ဖင်ကြားမညှပ်တော့တာ ကြာပေါ့။ မနက်ဖြန်ကျ လှေတစ်စီး ထပ်ဆိုက်လာဦးမှာ။ သည်တစ်ခါ ဘယ်တွန်းထုတ်ကြမလဲ စဉ်းစားထား။
written by Dr Soe Min
Posted by Burmabüro Germany at 09:15 No comments:
"Nyi Min Nyo (Literature Talk) Perth 2015"
Moe Lay has sharedavideo with you on YouTube
Nyi Min Nyo (Literature Talk) Perth 2015
by Win Thuzar
Nyi Min Nyo and U Bone (Dar Tu) came for Perh Literature Talk 2015.
Posted by Burmabüro Germany at 09:45 No comments:
"Literature Talk By Nyi Min Nyo _ 100th Anniversary of Bogyoke Aung San Event_Sydney _2-5-2015"
Literature Talk By Nyi Min Nyo _ 100th Anniversary of Bogyoke Aung San Event_Sydney _2-5-2015
Posted by Burmabüro Germany at 07:19 No comments:
သံလွင်ဆီ၏ ဆေးဘက်ဝင် အာနိသင်များ . . . . .
ကမ္ဘာတ၀န်းမှာ သံလွင်ဆီကို မိခင်သဘာဝကြီးကပေးတဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ ဆေးလက်နက်အဖြစ် လူသိများခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ရောဂါအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်ရာမှာ ဖြစ်စေ၊ အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရာမှာ ဖြစ်စေ သံလွင်ဆီရဲ့ အာနိသင်ဟာ သူမတူအောင် ထူးခြားလှပါတယ်။ သံလွင်ဆီရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်များကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အာဟာရဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် အားအင်ချို့တဲ့သည့် ကလေးငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ နာလံထစလူနာများကို အားဖြည့်ဆေးအဖြစ် တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီကို မှန်မှန်လိမ်းပေးရင် အသားအရေ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ ခရုသင်းရောဂါ ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်သောဂျုံမှုန့်နှင့် ရောစပ်လိမ်းကျံပေးပါက အံ့သြလောက်အောင် ပျောက်ကင်း သက်သာစေပါတယ်။
အအေးမိခြင်း၊ ကိုယ်လက်လေးလံညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းနှင့် ရင်ကြပ်၊ ပန်းနာရောဂါများအတွက် အာနိသင်ထက်မြက်တဲ့ ရင်လူးဆေးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သွားနာ၊ သွားကိုက်၊ သွားပိုးစား၊ သွားဖုံးနာ စတဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်းရောဂါများအတွက် ထိရောက်တဲ့ ထည့်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကင်းမလက်မည်း၊ ကင်းမြီးကောက်၊ ကင်းခြေများ စတဲ့ ကင်းအမျိုးမျိုးကိုက်ခဲ့လျှင် သံလွင်ဆီကို ကင်းဆိပ်ဖြေဆေးအဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။
၀မ်းမီးကိုတောက်စေတဲ့အတွက် သူချည်းသက်သက်ဆိုလျှင် အကောင်းဆုံးအစာကြေဆေးနှင့် နှုတ်မြိန်ဆေးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၀မ်းမီးအပူအပုပ်အချွဲများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ၀မ်းမှန်စေခြင်း စတဲ့အာနိသင်များကြောင့် အစာအိမ်ရောဂါ၊ အူသိမ်အူရောင်ရောဂါ များကို ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားသုံးအားဆေးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းလိမ်းဆေးများဖြစ်တဲ့ ဒဏ်ကျေလိမ်းဆေး၊ အကြောဖြေလိမ်းဆေးများ ဖော်စပ်ရာမှာလည်းကောင်း အစွမ်းထက်သော ဆေးအမည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆံကေသာအား လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ဦးခေါင်းအား အေးမြစေပြီး ဆံပင်ကို နက်မှောင်သန်စွမ်းစေ၍ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ ဆံပင်အရောင်ပြောင်းခြင်းတို့မှ အထူးကာကွယ်ပေးပြီး ဗောက်၊ ဒက်များ တွယ်ကပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလ ၀မ်းဗိုက်အားလိမ်းပေးပါက ဗိုက်ကြောမပြတ်အောင် ကာကွယ် ပေးသည့်အပြင် မွေးကင်းစ ကလေးသူငယ်များမှာ ဖြစ်တတ်သော အရေပြားယားယံခြင်းများကို အထူးပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
သံလွင်ဆီလေးဝယ်လာတုန်း သံလွင်ဆီအကြောင်း ရေးထားတဲ့စာရွက်လေးလည်းရှိတာနဲ့ ပုံလေးရိုက်ပြီးတင်လိုက်တာပါ။ နေ၀န်းနီနီ
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Share from HYDE" group.
To post to this group, send email to hydegroup@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to hydegroup+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/hydegroup?hl=en.
ရခိုင့်ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ တော် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
Maurk U – အေဒီ ၁၄ ရာစုခေတ်က ရခိုင့်ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ တော် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
မိုးမခစာဖတ်သူတဦး (ကမာရွတ်) (မူရင်းဆောင်းပါး – ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ)ကို ဖတ်ရှုပြီး ပြန်လည်ကောက်နုတ်ကိုးကား ရေးသားသည်)
မေ ၁၂၊ ၂၀၁၂
(ကိုးသောင်းဘုရား၊ မြောက်ဦး၊ ဓာတ်ပုံ – အင်တာနက်)
(ထုပ်ခံသိမ်၊ မြောက်ဦး၊ ဓာတ်ပုံ – အင်တာနက်)
၂၀၁၂ မေလ ၃ ရက်နေ့ က Global Heritage Fund ( ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ) က အာရှတိုက်ထဲမှာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု ဆယ်ခုဟာ ပျက်စီးပျောက်ကွယ်ရမယ့် ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီဆယ်ခုထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ ရှေ့ ဟောင်းမြို့ တော် မြောက်ဦးမြို့ တော်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။ နိုင်ငံတော်ပိုင် ကြေးမုံသတင်းစာမှာ အဲဒီကြေငြာချက်ကို သတင်းအဖြစ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ပိုင် ကြေးမုံသတင်းစာမှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို သတင်းအဖြစ် မေလ(၄)ရက်ထုတ်မှာ ပါလာပါတယ် ဆိုသော်လည်း ရခိုင့်ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ တော်ကို မဖော်ပြဘဲ ထိန်ချန်ခဲ့တာတွေ့ ရတယ် ။ နိုင်ငံတော်ပိုင် မီဒီယာတခုဖြစ်တဲ့ ကြေးမုံသတင်းစာက ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ တော်တခုကို ဘာကြောင့်ထိန်ချန်ခဲ့ရသလဲလို့ မေးရပါလိမ့်မယ် ။
အဲဒီသတင်းရေးသားချက်ကို မပြောခင် ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက အဲဒီ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ပြောသလို တကယ်ဘဲ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ထဲက ရခိုင့်ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ တော်ဟာ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်ရမယ့် ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ ကြုံနေပြီလား ။အဲဒီ အန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ စသဖြင့် သုတေသနလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ သုတေသနစစ်တမ်းတွေရဲ့ အဖြေတွေအတိုင်း ထိမ်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်ဟာ လက်ရှိ အစိုးရသစ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် ။ တဖက်မှာလည်း နိုင်ငံတော်ပိုင် မီဒီယာဘဲဖြစ်ဖြစ် တသီးပုဂ္ဂလမီဒီယာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စကို အရှိကို အရှိအတိုင်း သတင်းကို သတင်းအတိုင်း ဖော်ပြသင့်တယ် ။ ထို့ အတူ ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်သင့်တဲ့အကြောင်းတွေကို ဆော်သြသင့်တယ် ။
ကိုယ့်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ထဲက ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တခုဖြစ်တဲ့ ပြည်ထော်စုတိုင်းရင်းသားတစုရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ တော်ကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားမှုတခုလား။ ဒီလိုမျိူး ဖျောက်ဖျက် ဖုံးကွယ်မယ်ဆိုရင်
ဒီကြိုးစားမှုဟာ "ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေး" တနည်းအားဖြင့် "ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး" ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီး ပြောရဲပါတယ် ။
ရခိုင်မဟုတ်တဲ့ ရှမ်း ၊ ကချင် ၊ ကရင် ၊ မွန် ၊ ချင်းစတဲ့ အခြားအမျိုးသားတွေအတွက် နဂိုရှိပြီးသား မယုံကြည်မှုတွေကို ပိုလို သံသယဖြစ်အောင်တွန်းပေးသလိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် ။ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အတွက်ကတော့ ကျားနာကို ဆွပေးလိုက်သလိုမျိုး တနည်းအားဖြင့် လှုပ်နိုးလိုက်သလိုမျိုးဖြစ်စေတာ အမှန်ပါဘဲ ။
ဗမာအမျိုးသားတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ တော်ဖြစ်တဲ့ ပုဂံနဲ့ နှိုင်းစာရင် ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ တော်ဖြစ်တဲ့ မြောက်ဦးမြို့တော်ဟာ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံတော် အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်ရဲ့ ကျဉ်ဖယ်ခြင်း(ဂရုမစိုက်ခြင်း) ခံခဲ့ရပါတယ် ။
ပုဂံကို စာတတန် ပေတဖွဲ့ဂုဏ်ပြုထောပနာပြုနေကြပြီး ပုဂံကို မပျက်စီးရအောင် အစွမ်းကုန် ထောင့်စုံအောင် မွမ်းမံခြယ်သ ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နေကြချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်က ရှေးဟောင်းမြို့ တော်မြောက်ဦးကိုတော့ ဘယ်လို ဖျက်ဆီးပစ်ရမလဲလို့မဟာဗျူဟာတွေ ၊ နည်းဗျူးဟာတွေ ရေးဆွဲနေသလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တချက် မန္တလေးနန်းတော်နဲ့ မြောက်ဦးနန်းတော်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ ။ မန္တလေးနန်းတော်ဟာ သမိုင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် ကျန်ခဲ့ပေမယ့် မြောက်ဦးနန်းတော်ကတော့ မရှိတော့ဘူး ။ နောက်ဆုံး နန်းတော်ရဲ့ အုတ်မြစ်တွေကိုပါ တူးဖြိုပစ်မယ့် မဟာဗျူဟာရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ကျားနာကို လှုပ်နိုးသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
ဘာပဲပြောပြော အဲဒီအဖွဲ့ ရဲ့ အစီရင်ခံစာထဲက ပျက်စီးပျောက်ကွယ်ရမယ့်ဘေးတွေကတော့
(၁)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့် လာခြင်း
(၂)လုံလောက်သော ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း
(၅)ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကြောင့်လို နားလည်ပါတယ် ။
အာရှတိုက်ထဲက ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆယ်ခုစလုံးကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဖျက်ဆီးနိုင်မယ့်ဘေးအန္တရာယ်တွေလို့ သဘောပေါက်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မြောက်ဦးမြို့ တော်အနေနဲ့ ကတော့
ခရီးသွားလုပ်ငန်းစတဲ့ သုံးခုနဲ့သာ ပတ်သက်ပါလိမ့်မယ်။
အထူးသဖြင့်ကတော့ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုကို မစို့ မပို့ပြုလုပ်ပေးပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ လက်ရှိကာလမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းစဉ်အောက်က တရားဝင်ဖျက်ဆီးပစ်မယ့်စီမံကိန်းလို့ မြင်ပါတယ် ။ ဒီအမြင်အပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ထောက်ပြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
စစ်အစိုးရလက်ထက်ကရော လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာပါ ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက် ကားလမ်း ရထားလမ်းများဟာ ရခိုင့်ယဉ်ကျေးမှုများ တိမ်ကော ပျက်စီးသွားမယ့် နေရာများကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာတွေ့ ရတယ် ။
ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ရဲ့ အာရှတိုက်ထဲက စိုးရိမ်စရာဆယ်ခုထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ထဲက ရခိုင့်ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ တော်ဟာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့် ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ နေရခြင်းဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းရှိရှိလုပ် ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလုပ်ရပ်တွေကို ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းဆန့် ကျင်သင့်တယ်လို့ပြောချင်တယ် ။
မြောက်ဦးမြို့တော်ရဲ့ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေအထဲမှာ ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာတွေဖြစ်တဲ့ ကျောက်ဆစ်လက်ရာတွေအပါအ၀င် မြောက်ဦးမြို့တော်ထက် ရှေးကျတဲ့ ဓည၀တီမြို့တော် ဟောင်းနဲ့ ဝေသာလီမြို့တော်ဟောင်းတွေဟာလည်း အသက်ငင်လျက်ရှိပါတယ် ။
ပြည်ထောင်စုသားအသီးသီးစီရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးခံနေရတာကြောင့် ရခိုင်အမျိုးသားတွေအပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကလည်း အမျိုးသားရေးအမြင်အနေနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဘယ်လို ထိမ်းသိမ်း ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာကတော့ စိန်ခေါ်မှုတရပ်ဖြစ်နေမှာကတော့ သေချာပါလိမ့်မယ် ။ ။
4 Responses to Maurk U – အေဒီ ၁၄ ရာစုခေတ်က ရခိုင့်ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ တော် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
Posted by Burmabüro Germany at 09:13 No comments:
Indonesia has told Australia that most of the migrants stranded at sea in Southeast Asia are illegal labourers from Bangladesh, not oppressed Muslim Rohingya, Foreign Minister Julie Bishop said in comments published Saturday.
More than 3,500 migrants have swum to shore or been rescued off the coasts of Malaysia, Indonesia, Thailand and Bangladesh sinceaThai crackdown on human-trafficking in early May threw the illicit trade into chaos.
Speaking to The Weekend Australian newspaper, Bishop said Indonesia estimated that only 30 to 40 percent of the thousands still stranded at sea were Rohingya -- an impoverished Muslim community from Myanmar's western Rakhine state.
"They (Indonesia) believe there are about 7,000 people at sea [and] they think about 30 to 40 percent are Rohingya, the rest are Bangladeshi; and they are not, in Indonesia's words, asylum-seekers, they are not refugees -- they are illegal labourers. They've been promised or are seeking jobs in Malaysia," Bishop said.
"They said the Rohingya have gone to Bangladesh and have mixed up with the Bangladeshis who are coming to Malaysia in particular for jobs."
Bishop said that Indonesia's director-general of multilateral affairs, Hasan Kleib, had told her that on one vessel, Bangladeshis accounted for 400 of the 600 people onboard.
Australia's Foreign Minister Julie Bishop speaks duringapress conference in Sydney, on April2…
Myanmar has faced increasing international pressure to stem the exodus from its shores and deliver urgent humanitarian relief to thousands still trapped at sea.
On Friday it said its navy had rescuedaboat in the Bay of Bengal and brought to shore 208 people.
Tin Maung Swe,asenior official in the western state of Rakhine, told AFP that "about 200 Bengalis" were onboard.
"Bengalis" isaterm often used pejoratively by Myanmar officials to describe the Muslim Rohingya minority, 1.3 million of whom live in the country but are not recognised as citizens.
Australia, which maintainsahardline policy of denying asylum-seekers who arrive by boats resettlement and which turns back vessels when it can, has maintained its refusal to resettle any stranded boat people, saying to do so would encourage people-smuggling.
"I will say or do nothing to encourage people to take to the sea in boats and any suggestion that there is some kind of special resettlement program here in Australia for people taking to the sea in boats just encourages people-smuggling," Prime Minister Tony Abbott said on Friday.
"So it would be utterly irresponsible of me or anyone to suggest forasecond that we will reward people for doing something so dangerous."
David 36 minutes ago
Now we all know that all Rohingyas originally comes from Bangladesh. First they crossed the border into Myanmar illegally years ago & settled there & the Myanmar government was kind enough to let them stay. Their population swelled to close toamillion & tensions stated to rise with the locals who are the Rakhines. When things didn't go their way they turned violent & make it looked like they were the oppressed & the U.S & the west believed them & blame Myanmar. This is the problem of Bangladesh to begin with & it should be addressed to them. The boat people fleeing Bangladesh are posing to be Rohingyas from Myanmar with hope of getting U.N aid & assistance & possibly be accepted as refugees fleeing Myanmar. Australia has the right attitude not to accept them & the U.S should do the same. Once you accept them the flood gates will open & they will keep coming.
Nimbus7hours ago
Overpopulation is the root cause ofalot of problems.
Expand Replies (2)
Neo6hours ago
These so-called boat people aren't victim of human trafficking, the term "human trafficking" is for kidnapped people then sold into slavery, these boat people just want to leave their homeland for Malaysia(a Muslim country).
To do so, they can't just walk across Thailand to Malaysia, they have to hire someone who can provide them the transportation, temporary shelter, dealing with authorities etc.
Before reaching Malaysia border, they have to pay, that's it, you hire someone to do something, you have to pay.
This process go on and on for years,alot of people have already made it to Malaysia.
If some of them didn't pay money upfront, their relatives who have already entered Malaysia have to pay. (you hire someone to do something, you have to pay.)
All ofasudden, those stupid NGOs thought it's human trafficking, they trigger the crack down, now the inland route was shutdown, they're floating in the sea with nowhere to go!
NGO,agroup of useless clown, create this problem.
Mohan 8 hours ago
Look at the boat peoples, they are grown up, they take to the sea because some agent promise better live at other shore. If they make USD 100amonths and someone promise them USD 10000 at others shore. They will go. Thses are economy migrant. If you take in 1000 peoples you will get 10000 peoples. If the migrant resettled getajob and send money home, you will get 100000 peoples monthly, soon the locals will complaints because the migrants will take all the low end job for much lower salary and there will bealot of crimes. If nothing is done next Malaysian PM will be Bangladeshi or Burmese.
Timur6hours ago
Another scam, blame on the Myanmar for political purposes. Lies, lies.
Posted by Burmabüro Germany at 09:10 No comments:
အခုလက်ရှိ ရေမြောကမ်းတင် ဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ Boat People တွေရဲ့ ပြဿနာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို လုံးဝ အပြစ်ပုံချလာတာကို တွေ့လာရတယ်....... ဒီ Boat People တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကလာပါတယ်လို့ အတင်းလက်ညှိုးထိုးနေပေမယ့် အဲ့ဒိ Boat People ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ မျက်နှာ ရုပ်ရည် အသွင်အပြင်၊ စကားအပြောအဆို၊ ဓလေ့စရိုက် တူညီတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပုံဖျောက်ထားတာ တွေ့ရတယ်........
ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက မီဒီယာတွေဟာ သိသိသာသာ နိုင်ငံတကာကို ထောက်ပြ ပြောဆိုတာမျိုး လုပ်တာတွေ မတွေ့ရဘူး....... မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာရဲ့ ဖိအားအောက်မှာ ခေါင်းငုံ့ခံနေ
ရသလို ဖြစ်နေတယ်....... ဒီကိစ္စဟာ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရ တစ်ရပ်ထဲနဲ့ မဆိုင်ပဲ နိုင်ငံတွင်း
မှာ နေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေသာမက အတိုက်အခံတွေ အပါအဝင် နောင်အစိုးရလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထား
ဒီဖြစ်ရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲကို လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဝိုင်းဝန် ပြန်လည် မဆန့်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုရင် နောင် ဒီ Boat People တွေ ပြဿနာတက်တိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူတို့ရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ဆိုတဲ့ ပုံဖော်မှုတွေကို ကြုံတွေ့နေရဦးမှာပဲ........ ဒါကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ဖို့ နိုင်ငံသားအားလုံး
ဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြဖို့ လိုပါမယ်.......
ဒီအချိန်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ အတိုက်အခံပါတီဘက်က ထွက်လာတဲ့ စကားပါပဲ........ ဒေါ်စုက "နိုင်ငံရေးသမားဟာ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပဲ စဉ်းစားပေမယ့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်
ဟာ နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေအတွက် စဉ်းစားတယ်"လို့ ပြောခဲ့တယ်.......
သို့သော် ဒေါ်စုရဲ့ အတိုက်အခံပါတီက ဦးဥာဏ်ဝင်းဟာ "သူတို့ကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံခဲ့ရင် မြစ်ထဲကို ဒီအတိုင်းလွှတ်လိုက်ရုံနဲ့ မရပါဘူး........ ပင်လယ်ကို တွန်းလွှတ်လို့လည်း မရပါဘူး...... သူတို့က လူသားတွေပါ....... သူတို့ကို လူသားတွေအနေနဲ့ပဲ မြင်ပြီးတော့ လူ့အခွင့်အရေး ရသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်" ဆိုပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာ AFP ကို ပြောခဲ့ပါတယ်.......
အင်မတန် ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းပါတယ်...... လက်ရှိ Boat People တွေဟာ မူလ လားရာနိုင်ငံ ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား ခြေခြေမြစ်မြစ် ဘယ်သူမှ မပြောနိုင် မဆိုနိုင်ခင်မှာ အထင်ကရ ပါတီကြီးက ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးက ဒီလို ပြောဆိုလိုက်ပြီး နိုင်ငံသား ပေးခိုင်းတာ၊ လူ့အခွင့်အရေး စကားတွေ ပြောလာတာဟာ နိုင်ငံတကာက Boat People တွေ ကိစ္စနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ညှိုးထိုးနေချိန်မှာ ရေနစ်သူကို ဝါးကူထိုးလိုက်တာပါပဲ........
Boat People တွေရဲ့ ကိစ္စဟာ အင်မတန် နက်နဲပြီး စနစ်တကျနဲ့ လုံးဝ အမှားမခံပဲ ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပဲ....... လက်လွတ်စပါယ် ပြောဆို မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာမျိုး လုံးဝ လုပ်လို့မရပါဘူး........ မှားယွင်းဆုံးဖြတ်မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရည်ရှည် ထိခိုက်နစ်နာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါပဲ...... အစိုးရတစ်ရပ်ကိုပဲ ထိခိုက်မှာမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.......
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ Proxy လုပ်ထားတဲ့ နယ်စပ်က ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ဒီ Boat People တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို စနစ်တကျ လှိုက်စားနေတဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာဆိုးပါပဲ...... ဒါကို နိုင်ငံသားတိုင်း ဝိုင်းဝန်း တိုက်ဖျက်နိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံ ဖဲ့ချွေမခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်....... တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လက်ညှိုးထိုးနေတာတွေ၊ နိုင်ငံသားတွေတောင် လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ မရသေးချိန်မှာ အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းဆိုသလို နိုင်ငံသား ဖြစ်သည် မဖြစ်သည် မသိရသူတွေကို လူ့အခွင့်အရေး
ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာကို ပြောဆိုနေတာတွေဟာ အဲ့ဒိ ကင်ဆာရောဂါဆိုးကို ပိုပြီး ကြီးထွားလာအောင် လုပ်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ.......
ဒီအချိန်မှာ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံ၊ မီဒီယာနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးဟာ နိုင်ငံတကာက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ Boat People တွေရဲ့ က်ိစ္စကို အားလုံး လက်တွဲဆန့်ကျင် တွန်းလှန်သွားဖို့ လိုပါတယ်...... နောက်မို့ဆိုရင်တော့ အမြဲတန်းလိုလို ဒီလို ဖိအားတွေပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အတင်းလက်ခံခိုင်းတာမျိုး ရေရှည်မှာ ဆက်လုပ်နေကြမယ်ဆိုတာ အထူးတလည် ပြောစရာမရှိဘူး........
သားဆက်ခြားခြင်းမရှိ၊ ကလေးမြောက်များစွာမွေးပြီး လူအင်အားနဲ့ နယ်ခြဲ့လာနေတဲ့ ဒီရန်တွေကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ ညီညွတ်ကြဖို့ လိုပါပြီ.......
Posted by Burmabüro Germany at 09:08 No comments:
အောင်းမေ့ ဘွယ် (27)
မိန့် ခွန်းများ (14)
လူမှာအရေးကြီးဆုံး နှစ်ခုဘဲရှိတယ်။ အဲဒါက ကိုယ်ကျင့်
တရားရယ်၊ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးမှု love of truth
ရယ် ဒါဘဲဖြစ်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောရမယ်။
ပြည်သူလူထုအများစုကြီးက နိုင်ငံရေးဟာ ငါတို့ ကိစ္စ၊
ငါတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးဖို့ ဟာ ငါတို့ တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထားမှ
လူတိုင်းဟာ ဘယ်အနွယ် ဘယ်အဖွားကဘဲ
ဆင်းသက်လာပါစေ၊လေးစားသမှု့ နဲ့ တော့
ထိုက်တန်ကြတာချည်းပါ။ ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်
လေးစားသမှု ထားသလိုမျိုး လူတိုင်းအပေါ်တူညီစွာ
(ဦးသန့် - ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးဟောင်း)
ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ယုံကြည်မှုထက် သိမှုနှင့်ရူ့ မြင်မှုကို
(ဧဟိပဿိကော) လာလှည့် ရှု့့
(Dr. W. Rahnla)
(India Philosopher Mahatma Gandhi)
လူကိုဖျက်ဆီးတာဟာ ကြောက်ရွံ့ မှုပါ။ အာဏာမဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှိတဲ့ သူအဘို့ သူစွဲကိုင်ထားတဲ့ အာဏာလက်လွှတ်လိုက်
ရမှာကိုကြောက်ရွံ့ စိတ်က သူ့ ကိုဖျက်စီး ပြီးအာဏာမဲ့ သူတွေကျပြန်တော့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ 
ဓါးသွားမိမိအပေါ် ကျရောက်လာမှာကို ကြောက်ရွံ့
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း အိုဘားမား ရေးသား
Abhidhamma.de, Abhidhamma die systematische Lehre des Theravada-Buddhismus
ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို လွမ်းလောက်လို့လားဗျာ... Posted: 22 Jan 2012 09:30 AM PST ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၃ရက်နေ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး...
05)Bogyoke Aung San Speeche.5ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်း မိန့်ခွန်း (၅) by komyoedesign
ကွမ်းစား ဆေးလိပ်သောက် ဘေး မရောက် ရလေအောင်
ကင်ဆာ ရေစီးကြောင်း ဟာ ကမ္ဘာ့အနှ...